यिनीहुन् आफै रगत दिंदै विरामी बचाउँदै गर्ने भगवान रुपि डाक्टर, १०० पटक दिइसके रगत ! – AB Sansar
November 13, 2020 adminLeaveaComment on यिनीहुन् आफै रगत दिंदै विरामी बचाउँदै गर्ने भगवान रुपि डाक्टर, १०० पटक दिइसके रगत !
काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यसै भगवानको रुप भनिएको होइन । केही अपवाद वाहेक अस्पतालमा आएका बिरामीलाई निको बनाउने ध्याउन्न नै हुन्छ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको । ज्यान बचाउन भन्दै अस्पताल आएका बिरामीलाई बचाउन हर सम्भव प्रयास गर्छन स्वास्थ्यकर्मीले । एक जना यस्ता चिकित्सक छन जसले उपचार मात्र गर्दैनन् आवश्यक परेको बेलामा आफ्नै रगत दिएर धेरैको ज्या न जोगाएका छन् ।*****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
इमरजेन्सीमा आएका विरामीका आफन्त रगत नपाएर भौतारिकएो देख्न नसक्ने यि चिकित्सकले आफै रगत दिँदै बिरामी बचाउँदै गरेका छन् ।आफैँ उपचारमा खटिने डाक्टर सन्देश पन्थले २० वर्षको दौरान १०० पटक रक्तदान गरेका छन् । उनको रगतले सयौंको ज्यान बाँचेको छ । उनी जाहाँ जहाँ पुग्छन् विरामीले डाक्टरको रगत पाउँछन् । उनले यस्तो थुप्रै उदाहरण सुनाएका छन् । । म्याग्दी अस्पतालमा ड्युटीमा रहेको समयमा एकजना गर्भवती महिलाको इमर्जेन्सी अप्रेसन गर्नुपर्ने भयो । ती गर्भवती महिलाको अप्रेसन गर्नका लागि रगत र रक्तदान गर्ने व्यक्ति खोज्न समय लाग्ने भयो । त्यसपछि उनी आफैले रगत दिएर बचाए । आफै रगत दिए अनि आफैले श ल्य कृ या गरेर महिलाको ज्या न बचाए ।
म्याग्दीमै एक महिला अ त्यधिक र क्त श्रा वपछि म्याग्दी अस्पताल आइन् । उनलाई पनि तत्काल रगत चढाउनुपर्ने अवस्था थियो । उनले आफै रगत दिए अनि आफै श ल्य कृ या गरे । ३ पाउण्ड रगत चढाएर पछि मात्र ति महिलाको पा ठे घ र सफा गरिएको थियो ।
जुम्ला, गुल्मी, बुटवल, म्याग्दी, लमजुङ लगायतका जिल्लाका अस्पतालमा उनले काम गरेका छन् । ति अस्पतालमा उनले धेरै पटक यस्तै उदाहरणीय काम गरेका छन् । पाटन अस्पतालमा आफ्नै श्रीमतीका लागि पनि दुईपटक रक्तदान गरेको पनि उनी सम्झन्छन् । रक्तदान गरेको १० मिनेटमै बिरामीको शल्यकृया गर्न तयार हुन्छन् ।*****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
एकाबिहानै मुटु का’प्ने दु’घ’र्ट’ना : बैतडीमा बस दु’र्घ’ट’ना, ९ जनाको मृ’त्यु, २५ घा’इ’ते
June 14, 2021 santosh
सर्वोच्च फैसलापछि ओलीको पहिलो कदम, पत्नीको पुस्तक सार्वजनिक
विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय निकाल्यो अत्यन्तै जरूरी सूचना